Serge Zafimahova “Akaiky ny fipoahana ara-tsosialy”
Naina Andriantsitohaina Manomboka mafana ny fitsikerana azy
Manomboka mafana ny tsikera mahazo ny ben’ny tanànan’Antananarivo Atoa Naina Andriantsitohaina.
Anosizato Andrefana Raikitra ny fanisana ny mponina
Raikitra ny fanisana ny mponina ao anatin’ny kaominina Anosizato Andrefana, distrikan’Antananarivo Atsimondrano.
Olana be rehefa mihiboka na ekena aza fa misy ny aretina. Tokony hisy fandinihina ara-stratejika bebe kokoa ataon’ny mpitondra fa efa tsy tafavoaka intsony ilay izy satria efa miha manakaiky foana ny fipoahana ara-tsosialy.
Vahoaka noana no hiteraka an’izay fa tsy hoe zavatra hafa, ary lainga raha ny lazaina fa ny mpanao politika no hitarika an’izany satria tsisy mpanao politika mahazaka vahoaka intsony eto izao, hoy Atoa Serge Zafimahova mpandinika ara-toekarena. Noana ny olona, mivezivezy ny fanahy. Ny seha-panjakana no miasa, ary androany dia ny mpiasam-panjakana no tsy misy olona, fa ny sehatra tsy miankina efa ela no ao anatin’ny fahoriana. Efa betsaka ny nampidina ny karaman’ny mpiasany ka nisy ny 25%, nisy nampidina 50%, ao ny efa nampiato mpiasa, fa ao ihany koa no efa nandroaka mpiasa mihitsy. Rahampitso dia tsy maintsy hitady asa ny olona. Ny an’ny sehatra ara-dalàna izany, fa ny an’ny sehatra tsy manara-dalàna na “informel” dia mamelona olona hatrany amin’ny 10 tapitrisa. Ny antsika izao raha mamaky ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana (LFR), ho an’ny fizahantany dia 40 000 ny asa voakasika sy lasibatra ka 300 000 asa tsy mivantana ka io tsy mivantana io dia tafiditra ao anatin’ny tsy ara-dalàna. Ny mahagaga amin’izao dia tsy mbola nisy ny minisitera nanao tombana mahakasika ireo sehatr’asa tsirairay lasibatra hatreto, hoy hatrany Atoa Serge Zafimahova.